खाली पेटमा के नखाने ? « Pathibhara Post
२०७७, २८ आश्विन बुधबार
खानपान सम्बन्धी कतिपय सामान्य कुराहरुको हेक्का नहुँदा हामीले अनेकन स्वास्थ्य समस्या झेल्नुपर्छ । जस्तो कति खानेकुरा यस्ता हुन्छन्, जसलाई आपसमा एकसाथ खाँदा त्यो विषाक्त बन्छ । त्यसैगरी कति खानेकुरा खाली पेटमा खानु उचित हुँदैन । खानपानका यी सामान्य ज्ञान भएमा कतिपय संभावित जटिलताबाट बच्न सकिन्छ ।
दही स्वास्थ्यका लागि अत्यान्तै उपयोगी पेय हो । क्याल्सियम र प्रोटिनको भरपुर स्रोत हो यो । दहीले पाचन सम्बन्धी समस्या कम गर्न र शरीरमा उर्जा बनाइराख्न सहयोग गर्छ । गर्मीको याममा यसले शरीरलाई शितल बनाइराख्छ । तर, दही सेवनमा केही सर्त पालना गर्नु जरुरी छ । अक्सर दही रातको समयमा खानु हुँदैन । त्यसैगरी खाली पेट पनि दही खानु उचित हुँदैन । खाली पेटमा दहीको सेवनले शरीरमा एसिडिटीको स्तर बढ्नुका साथै चिसो लाग्न सक्छ ।
तरकारीमा मिसाउन होस्, अचार बनाउन वा सलादको रुपमा खान, गोलभेडा उपयोगी हुन्छ । त्यसो त हाम्रो भान्सामा गोलभेडा अनिवार्य जस्तै हुने गर्छ । गोलभेडा आफैमा स्वस्थ्यवद्र्धक पनि मानिन्छ । यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट पर्याप्त हुन्छ । यसले उच्च रक्तचाप, मुटु रोगको जोखिम कम गर्छ । साथै गोलभेडामा भिटामिन सि, पोटासियम तथा फोलेट पनि पाइन्छ । यति गुणी गोलभेडा खाली पेटमा भने खान उचित हुँदैन । खाली पेटमा गोलभेडा खाँदा पत्थरी, ग्याष्ट्रिक तथा अल्सरको जोखिम बढाउँछ ।
सदाबहार फल हो, केरा । उत्तिकै गुणी पनि । आइरन तथा पोटासियमले भरपूर केरा स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । यसको सेवनले शरीरमा आइरनको कमी हुन पाउँदैन । यद्यपि खाली पेटमा केरा खानु रोग निम्त्याउनु बराबर हो । खासगरी माइग्रेन, एसिडिटीका समस्या भएकाले खाली पेटमा केरा खानै हुँदैन ।
भिटामिन ‘सी’ले भरिपूर कागती, सुन्तला लगायतका अमिलो फल सबैको रोजाईमा पर्छ । विशेषगरी, जाडो मौसममा घाममा बसेर यस्ता फल खानुको मज्जा पनि बेग्लै हने गर्छ । शरीरलाई स्वस्थ राख्न पनि यस्ता फल निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर खाली पेटमा यस्ता फल सेवन गर्नाले एसिडिटीको समस्या निम्तिने गर्छ । त्यसैले, विशेषज्ञहरु यस्ता फल सेवन गर्न सल्लाह दिने गर्छन् ।
धेरैको बानी हुन्छ बिहान कफी वा चिया पिउने । त्यस्तै दिक्कलाग्दो समय कटाउन होस् वा कुनै खुसी मेट्न, कफीको साथ खोजिन्छ । कतिपयमा कफीको लत नै हुन्छ । यद्यपि बिहान खाली पेटमा कफी पिउनु उचित मानिदैन । यसले अपच, एसिडिटीदेखि अल्सरको समस्या समेत निम्त्याउने जोखिम हुन्छ ।
पिरो र मसलेदार खानेकुरा
हामीलाई अमिलो, पिरो र मसलेदार खानेकुरा देख्नसाथ लोभ लाग्छ । मुखमा पानी आउँछ । कतिपयले हरेक छाकमा यस्तै स्वाद खोज्ने गर्छन् । यद्यपि खाली पेटमा पिरो वा मसलेदार खानेकुरा खानु भनेको अल्सरको जोखिम बढाउनु हो । एसिडिटी, ग्याष्ट्रिकदेखि पाचन यन्त्रको रोग बढाउनु हो ।
खाली पेटमा के खाने ?
बिहान उठ्नसाथ मनतातो पानी पिउनु जरुरी छ । यसले पाचन तन्त्रलाई निकै फाइदा गर्छ । खासगरी तामाको जग एवं भाडामा राखिएको पानी पिउँदा अन्य किसिमको लाभ पनि मिल्छ । यसैगरी मनतातो पानीमा मह मिसाएर सेवन गर्दा पनि फाइदा हुन्छ ।
यसैगरी मेवा पनि खाली पेटमा खाँदा धेरै फाइदाजनक हुने बताइन्छ । खरबुजा खाली पेटमा खानु लाभदायक हुन्छ । ड्राइ फ्रुट्स पनि खाली पेटमा सेवन गर्दा बढी फाइदा मिल्छ ।
६५ वर्षमाथिका १७ लाखलाई भोलिदेखि खोप लगाइने,
काठमाडौं । सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियानको दोस्रो चरण आइतबारदेखि सुरु गर्ने भएको छ ।
थपिए दमकमा २७ सहित झापामा ७७ संक्रमित
झापा/प्रदेश १ मा आज ५५६ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । मोरंगमा २४२, सुनसरीमा १९९,
दमक/ कोरोनाका कारण तीन दिनसम्म बन्द भएको झापाको दमकस्थित आम्दा अस्पताल शुचारु भएको छ ।
आजदेखि आम्दा अस्पताल ३ दिन बन्द
दमक, कार्तिक ३/झापाको दमकमा रहेको आम्दा अस्पताल आजदेखि ३ दिन बन्द भएको छ । अस्पतालका